Geelloow: Horumarin Af Mise Horseed Aafo?! | KEYDMEDIA ONLINE
Geelloow: Horumarin Af Mise Horseed Aafo?!
Bashiir M. Xersi - Inta faraxsan kuma jiro, inta hambalyeynaysa kama mid ihi, inta jadbaysanna haba igu soo qaadin, maxaa iga reebay? Adaa ogaan doonee, bal ila sii dhiraandhiri Qormada. Jabuuti baa kulan ka dhacayaa, maanta looga hadli maayo sidii Soomaali loo NABADYN lahaa, ee waxaa loo fadhiyaa af Soomaaliga, af Soomaali aa? Haa, af Soomaali baa loo joogaa.
Maanta waxaa loo fadhiyaa shir AF ku sheegan, waxaa fadhiya gadaahiibtii, xeeldheerayaashii; Dhaqanka, Hiddaha iyo Afka Soomaaliyeed. Soomaalida dhexdeedana magac ku leh, ayna ka mid yihiin: Abwaan Maxamad Ibraahim Warsame "Hadraawi" Xuseen Sheekh Axmad "Kadare" Aw Jaamac Cumar Ciise, Abwaan Cabdillaahi Macallin "Dhoodaan" Abwaan Xasan "Ganey" Prof Siciid Saalax Axmed, Prof Cabdalla Maansuur, Dr Maxamad Daahir Afrax, Boobe Yuusuf Ducaale, Prof Giorgio Banti, Axmad Faarax Cali "Idaajaa" Dr Jaamac Muuse Jaamac, Cabdillaahi Sheekh Axmed, Prof Annarita Puglielli, Xasan Cabdi Madar, Axmed Aw Geeddi, Maryan Caarif IQB.
Maalintii afka Soomaaliga la qoray ama la qorayey, marna maanka lama galin in Jabuuti marti looga noqon doono, haddana, waa adduun iyo xaalkiise, oo danuba tiri. Saday u dhacday dawladdii Soomaaliya, waxaa la dumay waxyaabo badan oo aan dawlad iyo maamul la’aan hore u socon karin, ee maalintaa maxaa dhacay?
Maalintii dawladdii dhacday shirkii u horreeyey ee Soomaali loo qabtay wuxuu ka dhacay Jabuuti, dhacayna bartamihii bishii Maarso gugii 1991-dii. In kasta oo aan wax weyn ka so bixin, haddana, waxaan dhihi karaa, wuxuu ahaa shirkii Soomaali kala shiilay, waxaana laga garan karaa kii xigay sida wax u dheceen, oo qabsoomay bishii Luulyo isla hilaadadaa, oo Cali Mahdi Maxamed loogu soo doortay Madaxweyne KU MEEL GAAR ah.
Waxaa mudan in la xuso Cali Mahdi Maxamed kama mid ahayn raggii u soo Jabhadeeyey sidii Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre xilka looga qaadi lahaa, haddana, sidee ku dhacday, raggii Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre qori caaraddiis uga saaray Madaxtooyada iyagoo Muqdisho jooga inaan shirkaa laga qaybgalin? Adba ugeedka laga lahaa halkaa ka garo.
Sida caadigaa ama maangalka ah waxay tahay, inay kala mudan yihiin nin arrin u soo dhabar jabay iyo nin maanta soo isgaatay, ee aan waxba u soo qaban.
Kuma lihi Cali Mahdi lug kuma lahayn talada xilka looga qaadayo Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre, balse, Jabuuti taa baddalkeed baa ka dhacday, oo waxaa shirkaa lagu abaalmarshay rag aan u soo dhibaatoon sidii Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre xukunka looga tuuri lahaa, kaaga darane, waxayba u badnaayeen raggii shalay baallaha uga jiray Rajiimka, waxaa xusid mudan, in ay Muqdisho ka dheceen mudaharaadyo looga soo horjeedo shirkaa iyo natiijada ka soo baxdayba.
Haddii dibiritaa nagu dhacday, Al Xaji Jabuutina sabab u ahaa, illeen qof lagu yiraa madax baad noqonaysaa si uu ku diidaa waa adag tahaye, waxaa tihaa lagu jiray toban sanoo dhalatay oo dhammaatay, intaa Jabuuti bannaanka ayey ka eegaysay, maba ahan dawladdii shalay masuulka ka ahayd inayd macmalka KU GEERKA soo samaysay.
Waa iga su’aale, tobankaa Xildhibaan ma waxay matalayeen Beesha Jabuuti? Dabcan inaysan magaca Beesha Jabuuti ku soo galin way caddayd, haddana, qofkii jago aadan mudnayd kuu dhiiba, xil gaar ah baa idin ka dhexeeya! Aanba si kale u dhigee, yey mataleen tobankaa, marka laga soo tago in la yiri; Madaxweyne Geelle ayaa lagu sharfay? Anigu ma garan.
Midda kale, maxay ka walaxtay in Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu kali la noqdo magacaabista toban Xildhibaan oo Soomaali ah? Kaba xune, oo haddana, ka dhigay toban wadaad, meesha ma xil siyaasadeed baa lagu qaybsanayey, ma xil wadaad, ma xil beelo kala mudan yihiin, mise waxaa lagu dhisay dawlad Soomaali [Koofur iyo Waqooyi]?
Run ahaan, dhacdadaana wax ka gadooday ama ka hadlay ma jirin, iyana sidaa ayey ku martay.
Siddeed sano ka dib, waxaa mar kale shir la isugu tagay Jabuuti, ee kala dhacay horraantii iyo dabayaaqadii sanadkii 2008-dii. Maalintaa shaarka AFAR iyo BARKA waxaa ku wehliya mid kale oo ka sii dacar badan, waana SHAAR DIIMEED, ha illoobin shirkii Carta baa waxaa ku jiray toban Xildhibaan oo Mudane Geelle Magacaabay, oo dhammaan wada ahaa WADAADDO.
Maanta waxaa shirka jooga kuwo magac Diimeed ku yimid, aqriste, maxaa kuu baxay? Isku xir fiican ma samaysay?.
Waxaa lagu go’aan saday in tiridaa beelaysiga xun ah lagu daro intoo kale oo WADAADDO ah, ee haddana, iyaguna qaab BEELEED ku sii qabsaday. Midda la yaabka ah baa ahayd, SHARIIF SAKIIN goormuu WADAAD noqday, illeen kuwaa ayaa ku soo galay magacaaye? Kaba darane, ma garan waayeen marba haddii awood qaybsi la joogo, in labada BALAAYO mid laga taqalluso, ee kala ah BEELAYSI iyo DIIMAYSI, oo ay mid uun qaataan?! Dhibka baase ahaa inay labadii BELO ay wada qaateen, ayna sababtay in Baarlamaanka la gaarsiiyey 550, oo aan u baxshay: TIRO BADNE, TAYO YARE!